Ngaba ukukhanyisa kwigumbi lakho lokuhlambela kunesitayile esaneleyo?
Ikhaya / Blog / Ngaba ukukhanyisa kwigumbi lakho lokuhlambela kunesitayile esaneleyo?
2021 / 09 / 13 uhleloBlog 511 0
Indawo yangasese njengendawo yokuphumla kunye nokuphumla
Idlala indima ebalulekileyo kubomi basekhaya
Phakathi kwazo, kukho uninzi lokukhuthaza kunye nobuchule bobomi
ziyahluma apha ukuze zikhule
Lo mbandela, thatha ukuba uphonononge ukuba ungadala njani ukukhanya kwezibane!
Indawo yokuhlambela ukukhanya kobushushu bombala
Ukukhanyisa kwendawo yokuhlambela akufuneki kukhanye kakhulu okanye kube mnyama kakhulu. Ukukhetha ubushushu bombala kwi-4000-5000K kunokuba. Lo mbala wokukhanya unokudala ukukhanya, indawo ekhanyayo ethambileyo.
Itshathi yokukhanya yetshathi yobushushu
Iindawo ezahlukeneyo zomsebenzi wokulungiswa kwezibane
Igumbi lokuhlambela lahlulwe langamacandelo amathathu asebenzayo: indawo yokuhlambela, indawo yangasese, indawo yokuhlamba. Iimfuno zokukhanyisa zommandla ngamnye zahlukile, ke uyilo lokukhanyisa lwendawo yokuhlambela akufuneki luhlangane kuphela neemfuno zokukhanyisa ezisisiseko, kodwa zikwanokuhlangabezana neemfuno ezahlukeneyo zomsebenzi.
Indawo yokuhlamba ihlala yahlulwa "kwindawo yeshawa" kunye "nendawo yebhafu". Ezi zimbini zinokubakho ngaxeshanye, kodwa ngokuzimeleyo. Iindawo ezahlukileyo zineendlela ezahlukeneyo zokukhanyisa. Ukukhanya kwendawo yokuhlamba kunokufakwa kwisilingi, usebenzisa ukukhanya okanye ukukhanya okufihliweyo. Oku kulungele ukuhlamba kwelinye icala, kwelinye icala, kunokwenza imeko-bume.
Ibhafu yeyona ndlela yokuhlaziya umzimba kunye nengqondo. Iziqwengana zezibane okanye umkhondo wezibane kwindawo yokuhlambela kunokwenza umoya ococekileyo wokuhlamba.
Xa ukhetha izixhobo zokukhanyisa kwindawo yangasese, ukusebenziseka kunye nokulula kufuneka kunikwe eyona nto iphambili. Abantu abaninzi badlala iiselfowuni okanye bafunda xa besebenzisa indlu yangasese, ke ukukhanya kwindlu yangasese kunokuqwalaselwa xa kuyilwa kwaye kukhethwa ukuba kuyahlangabezana neemfuno zokufunda zokukhanyisa.
Indawo yokuhlamba ayiqulathanga kuphela umsebenzi wokuhlamba nokucoca, kodwa ikwanemfuno yokwenza izithambiso, ke le ndawo inesidingo esikhulu sokukhanya. Unokufaka ngokuthe ngqo izibane zesipili okanye ulungiselele izibane ezijikeleze isipili. Iziphumo zokukhanyisa ngezibane ezijikelezileyo aziyi kwenza ukuba izivamvo ezintlanu zibe nezithunzi kwaye zenze lula ukususwa kobuso. Ukongeza, izibane zodonga zinokufakwa kwisibuko ukongeza imeko yokuyinkqonkqoza ebomini.
Ngaphambili :: Ukukhula kwe-371% VS 70% Yehla! Ngaba uKhuphiswano lweNtengiso lweGumbi lokuhlambela lufikelele kwinqanaba le "White Hot"? next: Ngubani othi Amagumbi okuhlambela amancinci awanakuba sisiphelo esiphakamileyo? Iindlela ezili-11 zokwenza ukuba zibe nkulu kwaye zibe ntle ngakumbi
2021 / 09 / 27 415
2021 / 09 / 25 363
2021 / 09 / 24 491
2021 / 09 / 24 383